Maitiro Ekurega Vatengi Vatyaire Yako Inotevera Campaign | Martech Zone
China, December 16, 2010 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Mavhiki mashoma apfuura, takaisa Ooma - mhinduro yeVoIP yeimba kana bhizinesi diki. Izvo zvinoshamisa zvinoshamisa - kunyangwe kusanganisa Google Izwi (inova nhamba yekambani foni). Nhasi, takagamuchira iyi email uye ini ipapo ndakaida iyo.
Mubvunzo iwoyo chete ndiwo mubvunzo waunonyatsoda kubvunza vatengi vako kana zvasvika kugutsikana. Kana vatengi vako vakaisa mukurumbira wavo pamutsetse wekurumbidza bhizinesi rako, iwe unoziva kuti urikuita basa rakakura.
Muvhunzo mumwechete wakaita seizvi unonyanya kukosha mazuva ano… handina nguva yekupinda muzvidimbu uye kupindura kumwe kuongorora kukuru. Paunenge iwe uchingobaya baya pane iyi ongororo, iwe wakaunzwa kune yekumhara peji nekutengesa kwe1 kusvika gumi uye vaviri vakasarudzika minda yeruzivo rwako rwekuonana.
Paunenge wapedza kuendesa ongororo yako, unounzwa kune imwezve peji rekumhara:
Akapenya! Rino peji rekumisikidza rinosanganisira zvemagariro kugovana yakakosha kupihwa neyako shamwari dzako. Iwe uchangoti iwe unozvikurudzira… izvozvi Ooma irikukumbira iwe kuti uenderere mberi uye uite izvo chaizvo. Iyi ndeimwe yeakareruka uye akanyatsogadzirirwa email, peji rekumhara uye nhabvu dzakabatana dzakabatana dzandakaona.
Mushandirapamwe unofambiswa ne Zuberance, ane chirevo chinotevera cheumishinari:
Zvemagariro midhiya isimba rine simba, risingamiswe rakashandura kushambadzira. Chinangwa chedu kuZuberance ndechekugonesa vashambadzi kushandisa simba rezvemagariro kufambisa vatungamiriri vanokwanisa, traffic, uye kutengesa. Isu tinoita izvi nekupa vashambadziri vane simba tekinoroji chikuva chinoita kuti zvive nyore kuita uye kusimbisa maBrand Advocates paFacebook, Twitter, LinkedIn, Amazon, Yelp, brand mawebhusaiti, nharembozha, nezvimwe.
Tags: Brand Kuongorora
Emailium: Email Template Kufuridzirwa